【Indlu epholileyo】Igcwele uthando/eshushu kwaye ipholile/IZhangjiang Hi-Tech/Kufuphi neDisneyland/Kufuphi neNew International Expo Centre/Inokupheka
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguSherry
Indlu yonke ye "Cozy Maison" igubungela indawo emalunga ne-150 square metres. Uya kuhlala kwelinye lamagumbi azimeleyo. Ngelo xesha, unokwabelana ngegumbi lokutyela elibanzi, i-balcony, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela kunye nezinye iindwendwe. . Uluntu lwahlulahlulwe lwaba ngabantu kunye neenqwelo-mafutha, kwaye iindawo zokupaka azikho mgangathweni. I-Wi-Fi igqunywe kwindlu yonke, ukuze ukonwabele ukusefa kwiwebhu. Izixhobo zasekhaya zixhotyiswe ngokupheleleyo ukuzisa lula kuhambo kunye nobomi bakho. Nokuba ungekho ekhaya, ungaziyela ngokwakho ekhitshini, upheke ukutya okutyebileyo, usele neglasi yewayini.
Umthengi kuqala yinkonzo yethu yenkonzo, "I-Cozy Maison" igxile ekudaleni indawo yokuhlala efudumeleyo, ekhululekile, ecocekileyo necocekileyo. Izinto ezisetyenziswa lundwendwe ngalunye, kubandakanywa kodwa kungaphelelanga apho zokulala, tableware, iikomityi, njalo njalo, zonke iintsholongwane ngobushushu obuphezulu, kunye neemeko zococeko unokuqiniseka ukuba VIPs. Kwangaxeshanye, "I-Cozy Maison" ibonelela ngeendawo zokuhlala ezikumgangatho ophezulu ezinje ngomatshini wekofu weDelonghi, isicoci samanzi eSapphire, iseti yeti entle, istiriyo kunye nearomatherapy ethunyelwa ngaphandle. Ngentsasa eqaqambileyo, qala usuku olonwabileyo ngekomityi ye-latte epholileyo. Kubusuku obuzolileyo, oda ikomityi ye-aromatherapy, wenze ikomityi yeti, uhlale kwikona etofotofo, ubambe incwadi emnandi, okanye udlale umdlalo wechess. kunye neqabane lakho, uphulaphule. umculo nguMmangaliso, uphumle kamnandi uze uzive uhlazi- yekile. Ukuba uzisa nabantwana bakho abathandekayo, kukwakho nezinye izinto zokudlala kunye neencwadi zemifanekiso, ukuze abantwana nabo babe namava okuziva bengabanye kunye nolonwabo. Maninzi amathamsanqa amancinci apha, alinde ukuba uzivulele ngokwakho. Ndijonge phambili ekufikeni kwakho.
"I-Cozy Maison" ikwi-Zhangjiang Hi-Tech Park ePudong, apho izazinzulu ezininzi zaseTshayina, iinjineli kunye neenkampani zobugcisa zihlanganisene khona. Kwangaxeshanye, ikhampasi yaseZhangjiang yeYunivesithi yaseFudan kunye neYunivesithi yaseShanghai yeSayensi neTekhnoloji zilapha. Ukongeza kwimeko yemfundo eyomeleleyo, kukho yonke into yokutya, ukusela kunye nokudlala. Kukho izithili zorhwebo ezinkulu kwindawo ejikelezileyo, ezifana neChangtai Plaza, iGreenland Colorful City, njl. Amawaka eendawo zokutyela ahlanganiswe nokutya okumnandi okuhlukahlukeneyo. Ukongeza, thatha iMetro Line 2 ngqo kwisikhululo seenqwelomoya sasePudong, kwisikhululo seenqwelomoya saseHongqiao, kwiSikhululo sikaLoliwe esinesantya esiphezulu saseHongqiao, kwiPeople's Square kunye neNanjing Road. Shanghai Disneyland kunye New International Expo Centre kwakhona ngaphakathi ukufikelela lula, 15 imizuzu drive kude. Ndikholelwe, le ndawo kufuneka ibe lolona khetho lwakho lulungileyo lokuhamba kunye nokuhlala okufutshane.